विचार – Page2– Himalitimes
Dec182019 by HimalitimesNo Comments
प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस २, २०७६ |
खगिन्द्र राज पौडेल गणतन्त्रवादी भनिने र झुटको खेती गरेरै भएपनि देशको शासक बनेकाहरुले मात्र जीवनमा एकपटक देशका लागि सत्य बोलीदिने हो भने देशको अस्थित्वको रक्षा हुनसक्छ ।, तर जीवनको उदयदेखि हालसम्म आफूलाई संधै अंगालोमा बेरेर न्यानो काख प्रदान गर्ने नेपाल आमा प्रति यति न्याय गर्ने हिम्मतसम्म यी दास मनस्थिती बोकेका नेताहरुमा देखिएन । हुनत जो अरुको आज्ञा पालनलाई आफ्नो कुर्सी रक्षाको कवचको रुपमा देख
राकेश कुमार शर्मा स्थानीय, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि नागरिकहरुले भिजन नभएका पुराना सोच भएका राजनितिक पार्टीका नेताहरु र पुरानै शक्तिहरुलाई नै रोजे । जसबाट भिजन ,मिसन,क्षमता र दक्षता हेर्नुको सट्टा पुरानैसैलीमा पुरानै दल र नेता जिताउने काम मात्रै भयो । नेपाली नागरिकहरुमा आजसम्म पनि सचेतना र जनचेतना आएन् । यसको दुष्परिणाम वा भारी मूल्य हामी नेपाली नागरिकहरुले नराम्रो संग चुकाउनु प
Dec142019 by HimalitimesNo Comments
देशको आवश्यकता जनताको सत्ता, जनताको राजसंस्था !
सोम विक्रम सिंह लिपुलेक ,लिम्पुवाधुरा ,कालापानी यवम रितले नेपालको भुमि माथि भारतीय हस्तक्षेप बढिरहेको अवस्थामा सम्पुर्ण राष्ट्रवादी नेपालीको विरोध यथावत नै छ । दुई तिहाईको दम्भ देखाउने सरकारले सिमा विवादलाई सल्टाउँछ कि भन्ने झिनो आशा थियो । पचास बर्षको सत्ताको धाक लगाउने सरकारले सिमा बिवादलाई हल गरेर नेपालको भुमि फिर्ता गरि जनताको मन जित्न पर्ने सुकार्यमा लाग्न पर्ने हो । देउवाले यो ओली सरकारकै
Nov182019 by HimalitimesNo Comments
गणतन्त्रका नव सामन्तवादीहरु देश सिध्याउने भाइरस हुन !
खगिन्द्र राज पौडेल गलत प्रचार र गलत प्रयासहरु अन्नत: विफल हुन्छन् । देशभक्ति र सत्यतालाई परास्त गर्न सकिंदैन भन्ने प्रमाणित हुंदै आएको छ । विदेशी बिस्तारबादीहरुलाई सहयोग गर्दै देशलाई उपनिवेश बनाउने मूल उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको गणतन्त्रलाई अब राजा ज्ञानेन्द्र र नेपाली जनताको स्वाभिमानी कदमहरुले पछाडी धकेलिदिएको महशुस हुन थालेको छ। दरवार हत्याकाण्ड गरेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोष थुपारेपछि राजा
Nov52019 by HimalitimesNo Comments
सुदुरपश्चिमको गौरव परिवारको शान,जय नेपाल आईजिपी साहेव !
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, कार्तिक १९, २०७६ |
सोम विक्रम सिंह तँ घुस खान सक्छस् ,नेताको गोडा मोल्न सक्छस् भने भर्ति हो नत्र तेरो मर्जी । २०४६ सालको परिवर्तन पछि प्रहरी अधिकृतमा भर्ति हुन फर्म लिई सुझाव लिंदा भर्खरै रिटायर्ड भएर बसेका मेरो ठुलोबुवा हेम बहादुर सिंहले मर्जि भयो । जिजुमुवाको धारणा पनि तलब सलब केही पुग्दैन भन्ने थियो । मैले प्रहरी अधिकृतको सपना देख्न छोडें । आर्मि र प्रहरी व्यारेकमा हुर्कि बढेको र प्रहरी स्कुलमा पढेको हुनाले से
Nov42019 by HimalitimesNo Comments
सोम विक्रम सिंह कर्मनिष्ठ अभियान लिएर काठमाडौंबाट कुरिनटार हुँदै , मनकामना दर्शन ,गोरखा तथा लमजुङको कार्यक्रम सिद्वाउँदै पोखरा पुगियो । पोखरामा कार्यक्रम सिमीत थियो तर युवराज पारसलाई पोखराको मनमोहक तथा आकर्षक दृश्य तथा सुन्दरताले अति मनम‍ोहित पार्छ र त केहि दिन छुट्टि अब भन्दै पोखराको आनन्दमा भुल्न थाले । हामी पनि अभियानलाई थाँति राखि साँच्चिकै छुट्टि मनाउने तर्खरमा लाग्यौं । कोहि काठमाडौं फर्
सोम विक्रम सिंह धेरै दशक अगाडिको सुन्दर र शान्त नेपाल आज कुन स्थितिमा गुज्रिएको छ ? यसलाई एकान्तमा बसेर बुझ्न कोसिस गरे मन भक्कानिएर आउँछ । सदैव हामी अरूलाई दोष दिईरहेका हुन्छौं तर यस्तो स्थितिमा राष्ट्रलाई पुराउन आफ्नो पनि कुनै दोष तथा भुमिका छ भन्ने कहिलै स्विकार गर्दैनौं । देश विभिन्न प्रकारले अधोध्गतीमा धकलीरहेको छ भन्ने सम्पूर्ण नेपालीजनले बुझि नै रहेको छ । देशमा फेरि पनि जनताले नव मुहारको
Oct202019 by Himalitimes2 Comments
राजालाई राष्ट्र र राष्ट्रियता, जनतालाई राजसंस्था अपरिहार्य !
सोम विक्रम सिंह एउटा कुरा त शाश्वत छ । गुरु ग‍ोरक्षनाथको आशिर्वाद पाएका वंशज शाह बंशीय राजसंस्थामा सहनशिलताको मापन चरम रूपको उग्र देखिन्छ । शाहवंशीय कुनै सदस्यलाई कुनै राजनितीक सुझाव ,बिचार तथा धारणा दिनपर्छ भन्ने आवश्यकता म देख्दिन । समय समयमा कहिले काहीँ नभड्कियोस् ,बिचलित नहोस्, नबिरक्तियोस् भनेर झक्काउनु मात्रै जरूरत हुन्छ । राजसंस्थाका प्राय सदस्यको रङ्ग रङ्ममा ,रूप रूपमा ,रगत रगतमा र भ्र
Oct152019 by HimalitimesNo Comments
बलात्कारी अपराधी र भ्रस्टाचारी लुकाउने सरकारभन्दा पारस नै ठिक – राजकुमार
राजकुमार शाही ठकुरी एउटा युवती पुर्व युवराज पारस शाहको बाइकको पछाडि बस्दा यति ठूलो रोइला ? दर्जनौ व्यक्तिको टाउको काटेर जेल परेका अपराधिहरु राज्य संयन्त्रमा हुँदा किन गुपचुप ? १७००० निहत्था नागरिकको रगतमा होलि खेल्नेहरु राज्यसत्ता संचालक हुँदा ताली ? अनि देशको भुमि बेच्ने दलाहरु राष्ट्रको बागडोर सम्हाल्दा जय जयकार हुने ? अर्बौको भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टहरुलाई सुरक्षा पहरा दिदै सलाम ठोक्नु प
निर्मल निवासतिर किन बढ्दैछ जनताको मोह ?
खगिन्द्र राज पौडेल न त्यहाँ कुनै भोज थियो न त नाचगाना ,थिए त केवल नेपाली जनताका आशाका केन्द्र पुर्व राजारानी । यो ममतामय संम्वन्धलाई अहिलेका मालिकहरुले जे नाम दिए पनि समाजिक प्राणीका लागि अनुशासन र धैर्यता नै ठुलो रहेछ भनेर प्रमाणित गर्न अन्य कुनै प्रमाण आबश्यकता पर्दैन होला । दशैको व्यस्त समयमा आफन्त परिवारजनको भेटघाटलाई थाती राखेर, अनुशासन बिहिन बनेको स्वतन्त्रताबाट वाक्क बनेका नेपालीहरु अनुश